Faah faahin kasoo baxeysa Dil Maanta ka dhacay Magaalada Caabudwaaq | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faah faahin kasoo baxeysa Dil Maanta ka dhacay Magaalada Caabudwaaq
Faah faahin kasoo baxeysa Dil Maanta ka dhacay Magaalada Caabudwaaq
Faah faahino ayaa laga helayaa Nin ku hubeysnaa qori AK-47 oo barqanimadii maanta gudaha Magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ku dilay Nin la sheegay inuu kamid ahaa dadka deegaanka Magaaladaas.
Dad ayaa waxaa ay ku warrameen in Ninka la toogtay xili uu ku sugnaa xaafad ka tirsan Caabudwaaq, isla markaana waxaa la tilmaamay inuu u geeriyooday xabbado looga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Odawaa, waxaana dad yaqaanay ay sheegeen inuu Axmed kamid ahaa dadka muruq-maalka ee guryaha dhisa, kaasi oo caan ka ahaa Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.
Weli si dhab ah looma oga sababta keentay dilka Axmed Odawaa, hayeeshee dilkiisa ayaa waxaa uu kamid noqonayaa dilal kala duwan oo horey uga dhacay Magaalada Caabudwaaq, ayna geysteen rag hubeysan oo maleeshiyaad ahaa.
Wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in haatan ay socdaan baaritaano kala duwan oo ay wadaan laamaha amniga Booliska Maamulka Galmudug oo ay ku baadi goobayaan Ninkii dambeeyay dilkii Maanta ka dhacay.
Maqaal horeWafdi saaka gaaray Magaalada Baladweyne iyo ujeedka safarkooda
Maqaal XigaMaxay uga hadleen kulan dhexmaray Ra’iisul Wasaare Rooble iyo James Swan?